Guillaume Soro wuxuu ku dhaleeceeyay Macron wuxuuna sheegayaa runtiisa - teles relay
Emmanuel Macron oo aan la dhicin ereyadii qalafsanaa ee isaga ka dhanka ahaa, Guillaume Soro ma uusan qaadanin waqti uu ugu jawaabo madaxweynaha Faransiiska. Soro waa mid aan shaki ku jirin: wuxuu sii wadi doonaa inuu la dagaallamo Ouattara meel kasta oo uu iskaga helo Yurub "aagga xorriyadda" ayuu yiri.
"Xasiloonida Côte d'Ivoire kuma xirna in la ilaaliyo boqornimada xukunka. Waxa kaliya ee looga hortagi karo xasillooni darrada ayaa weli ah dimuqraadiyad sidaas darteedna loo ixtiraamo dastuurka Ivory Coast. Cidina kuma qasbi doonto inaan qirto in Ouattara uu kujiro xaqiisa inuu ku xad gudbo dastuurka ”, Soro ayaa yiri, ka dib markii uu aqriyay hadalada Macron in isagu si kastaba ha ahaatee uu sheegay in uusan dooneyn in uu faallo ka bixiyo.
Macron oo sheegay in aan mar dambe lagu soo dhaweyn doonin France, Guillaume Soro ayaa ku jawaabay "Yurub wali waa aag xoriyadeed oo isbadal badan. Waxaan sii wadi doonaa inaan kahortago ku xadgudubka dastuurka dalkayga xooggeyga oo dhan ”.
Soro sidaa darteed, dagaalka ka dhanka ah Ouattara ee xilli-seddexaad kuma xanuunsan karo nooc Seefta Damocles ah oo lagu daboolayo madaxiisa si looga hortago inuu cambaareeyo. “Madaxweynenimada Nolosha Afrika marwalba waan kasoo horjeedaa. Marnaba ma dhiibi doono xorriyadda hadalka. Ha la maqlo ”ayuu u digay.
Macron wuxuu ku dhawaaqay in Soro Guillaume laga saaray Faransiiska
Heshiiska xasiloonida ee Emmanuel Macron, Soro wuxuu rabay inuu u sheego cida ah xasiloonida dhabta ah ee Côte d'Ivoire. “Xasilloonida ayaa ah midka xabsiga gelisa hoggaamiyeyaasha siyaasadeed. Ayaa yaa madaxa looga jaray wiil yar oo u dhashay Ivory Coast si uu ugu soo rogo sharciga cannon iyo maleeshiyada ”, ayuu yidhi, isagoo ka xun xaqiiqda ah in Macron uusan lahayn "eray loogu talagalay in ka badan 100 qof oo ku dhintay Ivory Coast. “Iyagu waa kuwo diiddan. Waa hagaag!, Soro ayaa ku soo gabagabeeyey daalkiisa.
Lacagta Mobilka: Haweenka Ganacsatada ah ee reer Cameroon waxay doortaan WeCashUp si ay u dijitaamaan macaamilkooda maaliyadeed
'Khasaariye': Sidee cabsi weligeed ah u qortay Madaxweynaha Trump - New York Times
Nolosha: Duurjoogta - Qeybta 42 • VF -…